Iikhosi ze-27 zaSimahla kwi-Intanethi zaBafikisayo i-13-19 yoNyaka yaBadala i-2022
Iikhosi ze-27 zaSimahla kwi-Intanethi zaBafikisayo abaneminyaka eyi-13-19 ubudala
Apha uya kufumana iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi zabakwishumi elivisayo ukuba zigcine iingqondo zabo zibukhali kwaye zibancede ngokufanayo kwisikolo esiphakamileyo kwaye zinokubanceda bathathe isigqibo malunga noko banokukufunda kwikholeji okanye eyunivesithi.
Ezi zifundo zasimahla ze-Intanethi zolutsha zibonelelwa ngabahlohli abaphezulu kunye nabahlohli abavela kwiiyunivesithi ezahlukeneyo ezisasazeke kwihlabathi liphela. Ezi dyunivesithi ziyasiqonda isidingo sokuba umntu ofikisayo afundiswe kakuhle njengoko ebambe isitshixo sekamva elinempumelelo ngakumbi.
Abafundi bafanele bazi ukuba eli nqaku alenzelwanga kuphela ulutsha kuphela kodwa nangenxa yabazali nabo bonke abantu abadala ngokufanayo njengoko ukulifunda kuya kubabeka kulwazi kwizifundo ezikwi-Intanethi abanokuthi bazidlulisele kwabancinci kubo, mhlawumbi ngabantakwabo abakwiminyaka yobudala okanye ebantwaneni babo abo bangumzali.
ISILUMKISO: Kuya kufuneka uyazi ukuba zikhona iikholeji ze-intanethi ezikuhlawulayo ukuba uthathe iiklasi kwi-intanethi; oku kunqabile kodwa zikhona.
Njengomzali okanye umntakwenu omdala okwaziyo ukufikelela kwizifundo zasimahla ezikwi-intanethi zabakwishumi elivisayo unokuzidlulisela kubantwana bakho abancinci kwaye ube sisikhokelo sabo ekufundeni kwabo, ngubani na onokubanceda bazi ngezi zinto ukuba akunjalo umntakwenu omdala okanye umzali.
Olu lutsha lulikamva lehlabathi lethu kwaye yeyiphi indlela engcono yokubalungiselela eli kamva kunemfundo. Ukufundisa abakwishumi elivisayo ngendlela eyiyo yindlela amandla abo anokutyhilwa ngayo, alungiswe, aze abunjwe abe yinto enentsingiselo, enokuthi ngandlel’ ithile ibe negalelo elihle eluntwini.
Malunga nezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zaBafikisayo
Zithini izibonelelo zezifundo ezikwi-Intanethi kulutsha?
Ngaba zikho iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi zolutsha?
Izifundo zasimahla kwi-Intanethi zabaselula (IiKhosi zasimahla ze-Intanethi zabaneminyaka eyi-13+ ubudala)
#1 iVeki yeKhowudi: Ukufundisa ukuCwangciswa kwaBafundi abancinci
#2 Ukutya njengeYeza
#3 Ukutshintsha kweMozulu: Inzululwazi
#4 Izinto ezibalulekileyo kwiMpilo yehlabathi
#5 Uyilo lweKhompyutha
#6 Uthintelo lokwenzakala kuBantwana kunye nolutsha
#7 Ukufundisa Abantwana NgeDatha
#8 iNzululwazi yokuzilolonga
#9 Intshayelelo kwiThiyori yoMculo
#10 Imbali Enkulu: Ukudibanisa Ulwazi
#11 Guitar yabaqalayo
#12 Intshayelelo yeNzululwazi
#13 Ifashoni njengoYilo
#14 Ubhubhani, ubhubhani kunye nokuqhambuka
#16 Intshayelelo kwiKhalculus
#17 Ikhalculum: Iguquguquko elinye iCandelo 1 – Imisebenzi
#18 Ikhalculum: Iguquguquko elinye iCandelo 3 – Uhlanganiso
#19 Usifaka njani isicelo kwiKholeji
#20 Ukufaka isicelo kwiiDyunivesithi zase-US
#21 Intshayelelo yeFiziksi
#22 Inzululwazi yeSolar System
#23 I-Astronomy: Ukuphonononga ixesha kunye nesithuba
#24 Ukubhala ngesiNgesi eDyunivesithi
#25 Ukuziphatha kwezilwanyana kunye neNtlalontle
#27 I-Ecology: I-Ecosystem Dynamics kunye noLondolozo
Abakwishumi elivisayo banamhlanje banethamsanqa njengoko benofikelelo kubuchwephesha obuhlukeneyo obenza ukuba ukufunda kwabo kube lula kwaye kube krelekrele kwaye babafundise ukusebenzisa obu buchwephesha ngendlela efanelekileyo ikwabalulekile njengoko banemiba yabo emibi enokuthi ibe semngciphekweni wokufunda kwabo ngobuchule.
Banokufunda nantoni na abayifunayo besebenzisa i-smartphone kunye noqhagamshelo lwe-intanethi oluzinzileyo, injini yokukhangela ihlala ikhona ukuze ibanike iimpendulo abazidingayo, banokufunda ngokulinganayo ngokusebenzisa amanye amaqonga eendaba afana nomabonwakude, imidiya yoluntu, njl.
Itekhnoloji ikwenze kwaba lula ukufunda kwaye kububulumko kwaye iseyile teknoloji inye esetyenziselwa ukuyila nokuseka amaqonga okufunda online apho unokufunda khona nangayiphi na ikhosi onomdla kuyo ngaphandle kwengxabano.
Ukufunda kwi-Intanethi kuyilelwe ukunceda wonke umntu ukuba afumane imfundo ayifaneleyo okanye ayifunayo, unokuqeshwa kodwa ufuna ukufumana Isidanga esikhawulezayo esikhawulezayo kwi-intanethi okanye unokufuna ukufundela Isidanga se-intanethi sestanford, ewe kunokwenzeka ukuba ufunde kwaye ufumane la madigri kwi-intanethi.
Inokukwenza umdla ngakumbi ukwazi ukuba obalaseleyo Amaziko e-Ivy League owaziyo anikezela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi kwaye kuya kufuneka ujonge kuzo ukuze ube nokuhamba phambili kubahlobo bakho kwaye ube nobuchule kwizifundo eziphambili kwizifundo.
Kwakhona, kweli nqaku, ndidwelise iikhosi ezingama-21 zasimahla kwi-intanethi eziya kukubonelela ngezakhono ezimangalisayo kunye nolwazi, kwaye ulwazi olufunyenweyo luya kujongeka lulungile kwizicelo zakho zekholeji kwaye zikunike isiqalo phakathi koontanga bakho.
Ezi zifundo zasimahla ze-Intanethi zolutsha ziya kunceda ukulungiselela ulutsha oluya eyunivesithi okanye ekholejini, kwaye lubancede ukuba babe ngabafundi abazimeleyo kwaye bakwazi ukuthatha uxanduva.
Ngokungafaniyo nesikolo semveli, iikhosi ze-intanethi zibhetyebhetye zithetha ukuba uya kuzilungisa xa ufuna ukufunda njengethayimthebhile yakho.
Iikhosi ezikwi-Intanethi zikhawuleza ngokugqibeleleyo ukugqiba, ungagqiba ikhosi ekwi-intanethi kwinyanga enye ngamanye amaxesha ungaphantsi kwaye ufumane izakhono ezifanayo kunye nolwazi olufunyanwa ngabafundi rhoqo ngonyaka.
Ke oko kukushiya nexesha elingakumbi lokuqhubeka nokufunda, ke ngonyaka, unokufunda malunga nezifundo ezintlanu okanye nangaphezulu ezahlukeneyo kwi-intanethi.
Ukuthatha iklasi ekwi-intanethi njengomntu ofikisayo kuya kukuveza ngokukhawuleza kwitekhnoloji kwaye uxinzelelo lokufunda luyancitshiswa kakhulu, awuzukufuna ukuya esikolweni yonke imihla, uhlala endlwini yakho kunye nekhompyuter yakho kunye nonxibelelwano lwe-intanethi kwaye funda nantoni na onomdla kuyo.
Olunye uncedo olumangalisayo lwezifundo zasimahla ezikwi-intanethi kulutsha kukuba usenokuba kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye usagqiba ekubeni uthathe ezi zifundo, ungaya kwisikolo sakho esiqhelekileyo ufunde apho kwaye uqhubeke nokufunda kwi-Intanethi. Yinto emangalisayo?
Zininzi iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi zabakwishumi elivisayo ukuba bafunde yile nto inqaku eli libhekisa kuyo kwaye ndiqokelele i-21 yazo ukuze ukhethe ezo zikulungeleyo kwaye ungaqala ukufunda simahla.
Kananjalo, unokuthatha isigqibo sokufunda ngaphezulu kwesinye okanye kangangoko unakho ukuphatha kwaye awuzukuhlawula ukuba ufunde njengoko bekhululekile.
(Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaBantu aba-13 + ubudala)
Izifundo zasimahla ze-21 ze-Intanethi endiziqokeleleyo zezolutsha olukwiminyaka yobudala be-13-19 kwaye kunjalo;
Inkqubo yaBafundi abaDala
Utshintsho lweMozulu: Inzululwazi
Izibaluleka zeMpilo yeHlabathi
Ukuthintelwa kukonzakala kwaBantwana noLutsha
Ukufundisa abantwana ngeDatha
Intshayelelo kwithiyori yoMculo
Imbali enkulu: Ukuqhagamshela ulwazi
Ubhubhane, ubhubhane kunye nokuqhambuka
I-Calculus: Uhlu olulodwa olulodwa Ingxenye 1 - Imisebenzi
I-Calculus: I-Single Variable Part 3 - Ukuhlanganiswa
Indlela yokufaka isicelo kwiKholeji
Ukufaka isicelo kwiiyunivesithi zaseMelika
Inzululwazi yeNkqubo yeLanga
I-Astronomy: Ukujonga ixesha kunye nendawo
Ukubhala ngesiNgesi kwiYunivesithi
Ukuziphatha kwezilwanyana kunye neNtlalontle
I-Dino 101: iDinosaur Paleobiology
I-ecology: Dynamics ye-ecosystem kunye nolondolozo
#1 IVeki yeKhowudi: UkuFunda kweNkqubo yaBafundi aBaselula
Le khosi yasimahla ye-Intanethi yolutsha ijolise kootitshala, abazali kunye nabantwana bakowenu abadala ukukhuthaza abantu abakwishumi elivisayo ukuba bafunde ukwenza inkqubo kunye nekhowudi besebancinci. Wena njengomdala uya kuyifunda kwaye emva koko uyidlulisele kulutsha ngaloo ndlela ubaxhobisa ngezakhono zokucwangcisa kunye nekhowudi kwaye ubalungiselele ikamva kwindawo yedijithali.
#2 Ukutya njengoMayeza
Le yikhosi yasimahla ekwi-intanethi kulutsha apho bafumana khona ukuphonononga umxholo wokutya njengamayeza, bafunde ukubaluleka kokutya ekuthinteleni izifo ezithile bazi uhlobo lokutya abanokukutya xa begula ukuphucula impilo. Baya kuba nakho ukuqonda izondlo zokutya kunye nokubaluleka kwazo kwimpilo yabantu.
#3 Utshintsho lweMozulu: Inzululwazi
Wonke umntu unoxanduva lokukhusela uMhlaba, nditsho nolutsha, ngakumbi ulutsha kufuneka lufunde indlela utshintsho lwemozulu oluchaphazela ngayo iplanethi kunye nendlela yokuyiphepha kuba ikamva lomhlaba. Ngale khosi yasimahla ekwi-intanethi kulutsha, banokukhusela umhlaba kwingozi ngokuqonda isayensi.
#4 Izibaluleka zeMpilo yeHlabathi
Le khosi yasimahla ye-intanethi yolutsha yazisa ulutsha kwimbono yezempilo yehlabathi ukubafundisa indlela yokuthintela izifo kunye nendlela yokukhathalela abagulayo kunye nokujongana nemiba yezempilo. Ulutsha oluthatha esi sifundo luya kufunda ukubaluleka kokuhlala usempilweni kwaye oku kunokuqala umsebenzi kwicandelo lezempilo kubo.
#5 I-Computer Architecture
Iikhompyuter likamva kwaye ngubani ofunda ngcono kwaye axhotyiswe ngezakhono ukuba ayilolutsha, le khosi ifundisa ulutsha olunomdla uyilo oluntsonkothileyo lweekhompyuter kunye nazo zonke izinto zalo zangaphakathi. Le khosi yasimahla ekwi-intanethi yabakwishumi elivisayo iya kungenisa ulutsha kwindawo yedijithali kwaye ibalungiselele ikamva esithubeni.
#6 Ukuthintelwa kukonzakala kwaBantwana noLutsha
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi yabakwishumi elivisayo ijolise kootitshala, kubazali nakwabagcini babafundi ukuze bafundise abantwana babo iikhonsepthi eziphambili malunga nendlela yokuthintela ukwenzakala kwazo zonke iintlobo ezinokuthi zibeke ubomi babo emngciphekweni.
Idatha yinkqubo yokwenyuka nokuhla kwayo yonke into esiyenzayo kwilizwe ledijithali, le khosi iveze abantwana kwindawo yedijithali, ukubaluleka kwedatha kunye nendima ephambili ayidlalayo kwindawo.
#8 Inzululwazi Yomthambo
Ukuzilolonga kubalulekile emzimbeni nasengqondweni nokuba ungakanani na, le khosi yasimahla ekwi-intanethi kulutsha ifundisa ngokubaluleka kokuzilolonga kunye nefuthe elinalo emzimbeni womntu ngokwasemphefumlweni.
Ngaba ululutsha olunomdla kumculo okanye wena njengomzali uqaphele ukuba umntwana wakho uneetalente zomculo? Ke le khosi yasimahla ekwi-intanethi yabakwishumi elivisayo ilungile ukuba loo mntwana aqale ukufunda kwaye afumane amava kumculo womculo. Ekuhambeni kwale klasi ekwi-intanethi, abafundi baya kuphonononga ukuvumelana okuyisiseko, i-pitch, isingqisho, i-chords, izikali, amaqhosha nokunye
#10 Imbali enkulu: Ukuqhagamshela ulwazi
Abakwishumi elivisayo nabo kufuneka bafunde ngembali yomhlaba, ukuba kwakunjani kwiibhiliyoni zeminyaka eyadlulayo kwaye bafunde olunye ulwazi oludityaniswe nehlabathi. Ezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi zabakwishumi elivisayo ziya kubafundisa zonke ezi mbali njengoko bethatha uhambo lokufumanisa izinto zehlabathi lethu.
#11 Guitar yaBasaqalayo
Ngokusebenzisa ithiyori yomculo esisiseko, ulutsha lunokufunda indlela yokudlala i-acoustic okanye isiginci sombane ngokulandela le khosi yasimahla ye-intanethi. Ifundisa ulutsha indlela elula yokuba ngumdlali wesiginci kwaye baqale uhambo lwabo kwihlabathi lomculo.
#12 Intshayelelo kwiFilosofi
Ngaba uyazi ukuba yintoni ifilosofi? Ngaba uyazi ukuba kukho iikhonsepthi ezahlukeneyo ezifana nefilosofi yengqondo, ifilosofi yesayensi, ifilosofi yokuziphatha kunye nefilosofi yezopolitiko kwaye zonke zibalulekile ekuqondeni ngcono ubomi bethu bemihla ngemihla? Qalisa uhambo lwakho kwifilosofi ngale khosi yasimahla ekwi-intanethi yolutsha kwaye ufumane onke amava asisiseko efilosofi onokuwafumana.
Ukuba ifashoni Umyili ufuna ubuchule obuninzi kwaye ukuba njengomntu okwishumi elivisayo uneetalente ezinjalo zokuyila kuya kufuneka ujonge ekubeni ngumyili wefashoni, inenzuzo kwaye iyaqhubeka nokukhula kwaye ngaphandle kokuqokelela amava usemncinci kakhulu kuzakukwenza ube lukhulu bhetele xa usiba mdala uzenzela igama kolu shishino.
#14 Ubhubhane, ubhubhane kunye nokuqhambuka
Ukuqhambuka kobhubhane kutshanje ihlabathi elihamba kulo kubonise ukuba wonke umntu, ngakumbi ulutsha, kufuneka afundiswe ngendlela yokujongana nobhubhane okanye ubhubhane, afunde inyani malunga nezifo ezosulelayo, iimpendulo zonyango kunye nemithetho yokuvalelwa. Le khosi yasimahla ekwi-intanethi kulutsha iya kuhamba indlela ende ekuncedeni ukukhusela ulutsha kwizifo ezibulalayo.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi yabakwishumi elivisayo ibonelelwa ngezifundo eziphezulu ezivela kwiDyunivesithi yaseKentucky kwaye igubungela izifundo kwizifundo zamachiza aphakamileyo ezibandakanya indawo enje ngobume beatom, iikhompawundi, iimpendulo, istoichiometry, ithemochemistry kunye nezinye izihloko eziza kukwenza uphumelele ikhemistri yesikolo esiphakamileyo. imibala ebhabha.
#16 Intshayelelo kwi-Calculus
Qalisa uhambo lwakho oluya kubalo ngokusebenzisa le khosi yasimahla ekwi-intanethi yabakwishumi elivisayo ethi ichaze umfundi kwisiseko esisisiseko kunye nethiyori sokubala kwesayensi, ubunjineli kunye nemathematics.
#17 I-Calculus: Uhlu olulodwa olulodwa Ingxenye 1 - Imisebenzi
Emva kokuba uyigqibile ikhalusisi yentshayelelo kungcono ukuba ungene kule nto ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya malunga nomxholo, ukubala.
#18 I-Calculus: I-Single Variable Part 3 - Ukuhlanganiswa
Eli nqaku le-calculus ligubungela i-theorem esisiseko ye-calculus ehlanganisiweyo, edibanisa umahluko wokulinganisa kunye nayo yonke enye indlela yokudityaniswa enxulumene ne-calculus. Kule nqanaba, uya kufumana izakhono zokubala eziphambili.
#19 Indlela yokufaka isicelo kwiKholeji
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi yabakwishumi elivisayo ifundisa indlela yokukhangela kunye nokufaka isicelo kwikholeji kubandakanya inkqubo yokhetho kunye nendlela yokulungiselela amaxwebhu ayimfuneko kunye nokubhala njengezincoko eziyimfuneko kwizicelo zekholeji.
#20 Ukufaka isicelo kwiiyunivesithi zaseMelika
Inkqubo yesicelo seyunivesithi yaseMelika yaziwa ngokuba iyabhideka njengoko ingenayo inkqubo yokufaka isicelo esemgangathweni, le khosi yasimahla ekwi-intanethi kulutsha yenzelwe ukuphelisa le mbhodamo ngokunika ulwazi olusebenzayo malunga namaxwebhu kunye neziqwenga eziyimfuneko kwisicelo seyunivesithi yaseMelika. Iintsuku zakho zokudideka ziphelile ngale khosi.
#21 Intshayelelo kwiFizikiki
Ezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi zabakwishumi elivisayo zinikezelwa ngunjingalwazi ophezulu weFizikiki weYunivesithi yaseVirginia kwaye wazise abafundi abanomdla kwi-physics kwimeko yemihla ngemihla.
#22 Inzululwazi yeNkqubo yeLanga
Xa ujonga phezulu esibhakabhakeni ebusuku uyayithanda into oyibonayo kunye nokokufunda okungakumbi ngayo, ufuna ukwazi konke okukhoyo, ewe, ezi zifundo zasimahla ezikwi-intanethi zolutsha zisebenzisa imigaqo-nkqubo evela kwi-physics, biology, chemistry, kunye geology ukucacisa inkqubo yethu yelanga kunye nokutyhila iimfihlakalo zakho.
#23 I-Astronomy: Ukujonga ixesha kunye nendawo
I-Astronomy yintsimi enomdla yokufunda kwaye ulutsha luyakhuthazwa ukuba lufunde ikhosi ukuze baqale ukufumana amava kwangoko ngalo mbandela. Ukuba ulandela kwezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi zabakwishumi elivisayo, uya kuphinda uhlaziywe kwezona zinto zifunyanisiweyo zakutsha nje ngeenkwenkwezi njengoko oko kuya kunceda ngakumbi kumava akho ngeenkwenkwezi.
#24 Ukubhala ngesiNgesi kwiYunivesithi
Ukuba unqwenela eyunivesithi kubalulekile ukuba uyithathe le khosi, iya kukunceda ekwakheni izakhono zakho zokuthetha nokubhala isiNgesi ezinokukunceda kwezemfundo nakwezobuchwephesha. Zininzi iingcango ezithetha nokubhala isiNgesi ngokuchanekileyo ziya kukuvulela.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi kulutsha ifaka isifundo sokuziphatha kwezilwanyana kunye nomceli mngeni wokufikelela kwiimvakalelo zezilwanyana. Uya kufunda ngendlela yokunyamekela izilwanyana kunye nokufumana izakhono ezisisiseko kunyango kwinkqubo yokufunda le khosi kwi-Intanethi.
#26 I-Dino 101: iDinosaur Paleobiology
Iidinosaurs ziphelile kumawaka eminyaka eyadlulayo kodwa izifundo zisaqhutywa kuzo ukuze zifunde ngakumbi ngabo ngelixa babesaphila kwaye kungakunomdla ukwazi ukuba nawe unganako ukuba yinxalenye yolu phando ngokujoyina ezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi. ulutsha.
#27 I-ecology: Dynamics ye-ecosystem kunye nolondolozo
Kule khosi yasimahla ekwi-intanethi, ulutsha lwaziswa kwi-ecology nakwinkqubo ye-ecosystem dynamics, ukuba kuthetha ntoni kunye nendima edlalwa ngabantu kulo mbandela.
Oku kuzisa isiphelo seekhosi zasimahla ezikwi-intanethi zabakwishumi elivisayo, ezi zifundo ziya kunceda ekwandiseni izakhono zabo zokucinga kwaye zibenze babe nolwazi ngakumbi ukubonelela ngeempendulo kwizinto ebezisoloko zididekile ngazo.
Kukwabalulekile ukuba abazali, abagcini babo, kunye nabantakwenu abadala babakhokele abantwana babo ngexesha lokufunda kwabo kwi-Intanethi njengoko bekuya kudlala indima ebalulekileyo ekuthatheni isigqibo ngekamva labo kunye nomsebenzi wabo.
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika
Iikhosi zasimahla ze-Intanethi zeStanford University
Iikhosi zasimahla zase-Princeton kwiYunivesithi
funda kwi-intanethi Ikhonkco elixhasiweyo
iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi kulutsha
Post Previous:I-13 zeDyunivesithi ezindala kakhulu eCanada ngeentsomi zazo
Okulandelayo Post:IiSayithi ezingama-22 zamahhala zokuKhuphela ngaphandle koBhaliso
NgoSeptemba 18, 2021 kwi-11: 49 pm
Ngaba unganceda, ndikhangela ikhosi ukuba umntu wam oneminyaka eyi-15 athathe inxaxheba kuyo.
Julayi 14, 2021 kwi-10: 16 am
40, uLorong Mahsuri,
Epreli 10, 2021 kwi-10: 08 pm
molo ndifuna ukuthatha inxaxheba kwizifundo ezikwi-Intanethi ndifuna ukufumana amanqaku aphezulu esikolweni kuba kunzima kakhulu
UDisha Gaekwad uthi:
Matshi 14, 2021 kwi-2: 55 pm
Ndifuna ukuthatha inxaxheba kule khosi ekwi-intanethi.
ejamaika phipps uthi:
Novemba 25, 2020 kwi-5: 13
Ndingathanda ukufunda malunga nokuthintela ukwenzakala kwabantwana nolutsha.
Disemba 3, 2020 kwi-4: 48 am
Cofa nje kwikhonkco kwaye ubhalisele simahla